Louisiana Catahoula Leopard Imbwa, furry ine inotaridzika kutaridzika | Imbwa Nyika
Louisiana Catahoula Leopard Imbwa, imbwa inoshamisa uye inoshamisa
Kana iwe uchitsvaga ane rudo, ane simba mudiwa uyo zvakare ane asina kujairika bvudzi mavara, pasina mubvunzo iwe urikutsvaga Louisiana Catahoula Leopard Imbwa. Mhuka inoyevedza inozorodza avo vanofarira zvemitambo uye vanopedza nguva yakawandisa sezvinobvira nembwa.
Iwe ungade here kuziva zvese nezve rudzi urwu? Kana mhinduro yako yanga iri hungu, gadzirira kuziva kuti chii chiri mavambo, hunhu, uye zvimwe zvakawanda nezve iyo Louisiana Catahoula Leopard Imbwa.
1 Kubva uye nhoroondo yeLouisana Catahoula Leopard Imbwa
3 Maitiro uye hunhu hweLouisiana Catahoula Leopard Imbwa
3.1 Zvakaoma here kudzidzisa?
6 Louisiana Coahula Leopard Imbwa Mifananidzo
Kubva uye nhoroondo yeLouisana Catahoula Leopard Imbwa
Yedu protagonist imbwa hombe yakakura inoyera ropa iyo iri pamutemo kubva kuLouisiana (USA). Iyo inofungidzirwa kuve yakasanganiswa yemastiffs nedzimwe imbwa dzekuEurope dzakaunzwa pamafambiro eSpain mukati mezana ramakore rechiXNUMX, asi zvinowanzoita kuti kwayakatangira ichangobva kuitika. Imwe dzidziso inoti yakatanga kukura muzana ramakore rechiXNUMX, imbwa dzeBeaucerón (mufudzi weBeauce) padzakatanga kusanganiswa nemapere matsvuku. Saizvozvowo, zita reCatahoula harizivikanwe zvechokwadi kana richibva mururimi rwekuzvarwa rweChoctaw.
Iyo imbwa hombe, ine huremu hwe23 kusvika 36kg uye hurefu pakasvava pakati pe51 ne66cm. Muviri wake wakabatana, une mhasuru, une chipfuva chakadzika. Inodzivirirwa nejasi rebvudzi pfupi, rakasimba uye rinopenya, kana mukobvu uye nemvere. Inogona kuve ingwe tsvuku (brown uye toni toni), yebhuruu ingwe (yakasviba grey tones, nhema uye imwe chena) uye nhema mbada (rima toni). Musoro wakaita kunge wedanda, uine nzeve dzakarembera dzakatenderera muchimiro. Maziso avo anotaridzika kunge girazi remabhura, zvinova zvinoitika kana zvikamu zviviri zvine mavara negirazi zviripo muziso rimwe chete. Makumbo acho akareba uye akasimba.
Ane hupenyu hunotarisirwa hwe Makore 12 kusvika 14.
Maitiro uye hunhu hweLouisiana Catahoula Leopard Imbwa
Imhuka inofarira kushanda. Muchokwadi, unoida. Izvo zvakakosha kuti chero munhu anoda kugara neCatahoula Leopard Imbwa azive izvozvo Iyo imbwa inofanirwa kutorwa kunoshandiswa, zvese zviri zviviri zvepanyama uye zvepfungwa. Akangwara kwazvo, saka zvinokurudzirwa kwazvo kutenga mitambo yekudyidzana imbwa kana kuzviita isu pachedu kumba kana mubindu kuitira kuti vanyatsoneta.
Uyewo, anozvishingisa uye anovimba zvakanyanya nemhuri yake, kusvika padanho rekuti haafarire kuve ega. Iye anodzivirira vaanoda uye anowirirana kunyanya zvakanaka nevana.
Zvakaoma here kudzidzisa?
Sezvo iri mhuka yakazvimirira, haisi imwe yemhando dzakareruka. Izvo zvakakosha kuti uve nemudzidzisi mumwechete, uye kuti iye anonyatsoziva izvo zvaanoda kumudzidzisa. Saizvozvowo, matekiniki anoshandiswa anofanira kunge ari ekudzidzisa kwakanaka, nekuti zvikasadaro imbwa icharasikirwa nechivimbo chainacho maari.
Izvo zvinokurudzirwa zvakanyanya kuti mhuka idye Ini ndinofunga kana chikafu chakagadzirwa chakagadzirwa kunyanya nenyama kana hove, isina pfupa kana mhino. Zvakare, haugone kushaya mvura. Uye pese paanozvibata zvakanaka kana iwe uchida kumupa mushonga, usazeze kumupa mushonga unoenderana nembwa.
Munguva yekudonhedza mwaka inowanzo tenderera kurasikirwa nevhudzi rakawanda, saka zvichave zvakafanira kuikwesha zuva nezuva, pakati peimwe nekaviri nguva. Kana iwe uchida kuti irege kusiya mienzaniso yakawanda pasofa kana imwe fenicha, zvinonakidza kushandisa mizinga ine mitsindo yakaoma uye inovhara pamwe, nekuti izvi zvinobvisa rakawanda rebvudzi rakafa.
Kuti irambe yakachena, inofanira kugezwa kamwe chete pamwedzi. Kana iwe uchitya mvura, unogona kushandisa yakaoma sipo.
Izvo zvakakosha kuti iwe ubude kunze kwemba unoita zvekuita zvemuviri, sekumhanya kana kufamba. Izvo zvakare zvinonakidza kuti iwe unodzidzira mimwe mitambo, senge agility kana disc imbwa; Neiyi nzira, anozofambidzana nedzimwe imbwa nevanhu, uye kumba achakwanisa kunakidzwa nekambani yavo zvakanyanyisa sezvo achange akadzikama sezvo anga achikwanisa kupisa simba rese rakaunganidzwa.
Louisiana Coahula Leopard Imbwa imbwa inogona kutambura dumbu richimonyoroka kana kunyange hudyu dysplasia. Kunyangwe iwe uchifanirwa kuziva kuti kana ukamuchengeta zvakanaka uye uchimuendesa kuna vet pachiratidzo chidiki diki chinoratidza kuti chimwe chinhu hachina kumira zvakanaka, anogona kuzokwanisa kupora nekukurumidza uye nekuenderera mberi nekuita zviito zvake.
Pamusoro peizvozvo, kana iwe usiri kuda kuti ave nembwanana, zvinokurudzirwa kufunga nezve kumusunga iye kana nyanzvi ikakuudza iwe.
Iyo irudzi rusingawanzoitika muSpain, saka mitengo inosiyana zvakanyanya. Paavhareji, mutengo wembwanana uriko 500 euros, asi iwe unogona kuiwana ye300 euros.
Louisiana Coahula Leopard Imbwa Mifananidzo
Kana iwe uchida kunakidzwa nemamwe mafoto eiyi imbwa, apa une:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Imbwa nyika » General Imbwa » Imbwa dzinobereka » Louisiana Catahoula Leopard Imbwa, imbwa inoshamisa uye inoshamisa
Bearded Collie, shamwari yepamwoyo yevana
Zvese nezve Weimaraner